चीनले ४ दिनमै १ करोड १६ लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्‍यो ! « MNTVONLINE.COM
चीनले ४ दिनमै १ करोड १६ लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्‍यो !
एजेन्सी । चीनले ४ दिनमै १ करोड १६ लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गरेको छ । गएको हप्ता १३ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि सहरका सबै बासिन्दाको परीक्षण गर्ने निर्णय अनुसार पछिल्लो ४ दिनमा १ करोड १६ लाख जनाको परीक्षण भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामले जनाएका छन् ।
चिङदाओका उपमेयर चिउ चिङदाओले गएको सोमबारदेखि बिहीबारसम्म झण्डै १ करोड १६ लाख मानिसमा कोरोना परीक्षण गरिएको र कुनै पनि नयाँ सङ्क्रमित नदेखिएको बताएका छन् । गएको मे महिनामा पनि चीनले कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरका एक करोड १० लाख नागरिकको कोरोना परीक्षण गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चीनबाट फैलिन सुरु भए पनि अहिले त्यहाँ सङ्क्रमण नियन्त्रणतर्फ गइसकेको छ । तर विश्वका धेरै जसो देशमा कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको छ र अझै पनि लकडाउन लगाइएको छ ।